Izinqolobane ZikaBill Gates - Ilungelo LaseMelika Lokukwazi
Ama-GMOs 2.0: Ngabe i-Synthetic Biology Ikhomba Ekudleni noma Esiphuzweni Eduze Kwakho?
Posted on June 20, 2016 by UStacy Malkan
Isitshalo esidala se-stevia esenziwe ngemvelo.
Isiko lethu lihlaselwe ngombono wokuthi ubuchwepheshe bungasisindisa - noma okungenani buvule amathuba amahle ebhizinisi! UCargill, isibonelo, usebenza ku ubuchwepheshe bokudla obusha elingisa i-stevia, esikhundleni sikashukela esivela emaqabungeni ezitshalo, "emakethe yokudla eqhumayo yemidlalo."
Umkhiqizo omusha kaCargill, i-EverSweet, usebenzisa imvubelo eyenziwe ngofuzo ukuguqula ama-molecule kashukela alingise izakhiwo ze-stevia, ngaphandle kwesidingo sesitshalo uqobo.
Yakhiwa kusetshenziswa i-synthetic biology (noma i- “synbio” ngamafuphi), uhlobo olusha lobunjiniyela obufaka phakathi ukuguqula noma ukudala i-DNA ukuze kuhlanganiswe izinto ezihlanganisiwe kunokuzikhipha emithonjeni yemvelo - inqubo kwesinye isikhathi ebizwa ngokuthi yi-GMOs 2.0.
NgoJuni 1, Ukuphathwa Kwezokudla Nezidakamizwa zase-US qeda indlela ye-EverSweet enegama “elibhekwa njengokuphephile” (GRAS). Ekugcineni ingasetshenziswa “kuyo yonke into kusuka kubisi kuya kumathebulethi wethebulethi neziphuzo ezidakayo, kodwa iziphuzo eziphansi noma ezingekho zero ziyindawo emnandi,” ngokusho kwe- I-Navigator Yokudla.
Futhi-ke kuqala inguquko entsha elandelayo yobuchwepheshe bokudla: izinkampani ezijaha ukuhambisa ukukhiqizwa kokudla zisuka ezweni ziye ebhodini ngaphandle kwemithetho noma imithethonqubo ekhona edinga ukuhlolwa kwesayensi noma ukwenza izinto obala.
Bazoyithengisa kanjani abathengi bezinto zokwenziwa?
Inselelo enkulu ebhekene ne-biology yokwenziwa ukuthi abathengi banamuhla bafuna ukudla okusha kwemvelo okunamalebula alula acacile - ini Izindaba Zebhizinisi Lokudla wabiza “ukuthambekela konyaka” ngonyaka odlule.
"Kungani singafuna ukudla kwe-synbio?" U-Eve Turrow Paul, umbhali kanye nomeluleki womkhiqizo wezinkampani, ubuze ngokungaphenduli I-Huffington Post. “Awu, izizathu ezimbalwa. Into yokuqala ohlwini ukushintsha kwesimo sezulu. ”
Ukuguquka kwesimo sezulu yisona sizathu sokuqala se-biology yokwenziwa? Kuthiwani ngokuthwebula imakethe yokudla okuqhumayo yemidlalo?
Kukhona lapho inselelo ye-PR ebhekene nobuchwepheshe obusha bokudla: ungayibeka kanjani imikhiqizo yokudla eyenziwe ngamasu welebhu ezwakala ngendlela exakile ngezinjongo zamalungelo obunikazi nenzuzo njengento ephephile empeleni izinzuzo abathengi.
Inkampani enkulu kunazo zonke yezolimo, ukudla kanye nokwenziwa kwebhayoloji yahlangana ndawonye eSan Francisco ngo-2014 ukuxoxa ngale nselelo ye-PR.
UDana Perls wabangane bomhlaba, obehambele lo mhlangano, wawuchaza ngokuthi “ukuqonda okwethusayo enqubeni yokwenziwa kwebhayoloji yokwakha umlando wezindaba ophekwe ngoshukela ukuze udideke umphakathi, ungazinaki izingozi, futhi ufune nengubo 'yokusimama' yemikhiqizo emisha yokwenziwa yebhayoloji engenza inzuzo. ”
Ochwepheshe be-PR kulo mhlangano bancome ukuthi kugwenywe amagama anjenge- “synthetic biology” nelithi “genetic engineering” (okwethusa kakhulu, ukubuyela emuva ngokweqile), futhi baphakamisa ukuhamba ngezincazelo ezingacacile ezinjengokuthi “ukuvutshelwa okutholakele” nokuthi “uhlobo olufanayo.”
Bancome ukugxila kwabezindaba ezindabeni zethemba nezethembisayo, ukuthatha imizwa yomphakathi, nokwenza izishoshovu zokudla “zizwe sengathi sonke simasha ngaphansi kwesibhengezo esifanayo” ukuze kube nokusimama kokudla, ukusebenzela obala kanye nobukhosi bokudla.
Umuntu othile ubelalele. Indaba mayelana neCargill's ithuba elikhulu le-stevia akazange akhulume ngobunjiniyela bezakhi zofuzo noma i-biology yokwenziwa, kepha wachaza “ukuvutshelwa njengendlela.” Kuphele ngesethembiso sokuthi uCargill akanalutho alufihlayo mayelana nokuthi izithako zenziwa kanjani futhi uzokubeka ilebula ngokucacile nangokunembile imikhiqizo.
"Sikhombe lesi sikhala ngendlela esobala ngokuphelele," wathi USteve Fabro, umphathi wezokukhangisa wezinhlelo zomhlaba wonke weCargill.
Isithako esisha sihambisana nezinguquko ezinkulu eCargill. Ngemuva kweminyaka emibili inciphile inzuzo, inkampani ezimele enkulu kunazo zonke eMelika isiyazibeka kabusha “ukuze yanelise abathengi ezimakethe zaseNtshonalanga ezibalekela izinhlobo zokudla ezijwayelekile ezincike ezintweni eziphansi, ezisetshenziswayo eziye zaba yizinkampani ezifana neCargill,” kubika uJacob Bunge ku- I-Wall Street Journal.
Abathengi “bafuna ukwazi ukuthi yini ekudleni kwabo, ngubani owenzile, hlobo luni lwenkampani, ingabe banesimilo, baziphatha kanjani izilwane?” UCargill Chief Executive uDavid MacLennan utshele iBunge.
Ngezithako zokwenziwa zebhayoloji, lokho kungaba yinselele.
Lapho bebuzwa kahle ukuthi bahlela kanjani ukubiza i-EverSweet, ukuhola kwezokuxhumana kukaCargill uKelly Sheehan uphendule nge-imeyili,
“Abathengi kufanele bakwazi ukutshela umehluko kwilebula phakathi kuka-stevia ovela emaqabungeni nase-steviol glycosides akhiqizwa ngokuvutshelwa. UStevia osuka eqabeni e-US njengamanje ubhalwe ngokuthi 'i-stevia leaf extract.' I-EverSweet izobhalwa e-US ngokuthi 'steviol glycosides' noma 'Reb M noReb D.' E-EU okulindelwe ukuthi i-EverSweet izothola inombolo ka-E eguquliwe ukuhlukanisa le mikhiqizo emibili. ”
UShehan wengeze wathi, “UCargill uzibophezele ekubonakaleni nasekwabelaneni ngemininingwane yomkhiqizo e Cargill.com kusuka 'ku-stevia leaf extract' kuya ku-'non-GMO stevia leaf extract.' ”
Uyadida? Mhlawumbe, kepha izinqumo zokulebula zingashiyelwa izinkampani. Njengama-GMO esizukulwane sokuqala, ukufakwa ilebula akudingeki e-US (yize iVermont izodinga ilebuli ye-GMO eqala ngoJulayi 1 ngaphandle kokuthi Kuyangenelela iCongress) nezinkampani zikhululekile ukukhangisa imikhiqizo yazo “njengemvelo” (yize i-FDA injalo ukubukeza ukusetshenziswa yalelo gama). Azikho izindinganiso zokuphepha futhi azikho izidingo zokuhlola zokudla ezakhiwe nge-synthetic biology.
Lolu hlelo lokuxegisa luthokozela izinkampani ezimagange ukuthola amalungelo obunikazi obusha bokudla.
Njengoba uPerls echaze umhlangano we-synthetic biology PR, “Ingqikimba ecacile emhlanganweni bekuwukuthi imithetho embalwa kahulumeni iba ngcono, kanye nokuzilawula kwezimboni kungcono kakhulu. Kube nokuvumelana okujwayelekile egumbini lokuthi umphakathi akufanele ukhathazeke ngokushoda kwemininingwane yezokuphepha; kodwa-ke, izifundo zebhizinisi zangaphakathi nezizixhasayo zingumnikazi womphakathi futhi azinakwabiwa nomphakathi. ”
Sike sayizwa kuphi le ndaba phambilini?
Ulwazi lobunikazi, amalungelo obunikazi, ukungabi bikho obala kanye nokuzihlola komkhakha kube yizimpawu zezizukulwane zokuqala ze-GMO - kanye nophethiloli wokukhula kokungathembani kwabathengi kanye nezidingo zokubeka obala okuye kwabamba imboni yezokudla.
Izinkampani ezizuza kuma-GMO wendabuko - ikakhulukazi iMonsanto, iDow nezinye izinkampani ezinkulu zembewu yamakhemikhali - ziphendulile ekuhlaseleni okwenziwa izinkampani ezinkulu: ngokuphonsa imali enkulu Imisebenzi ye-PR ukuhlasela abagxeki kanye spin imikhiqizo yabo njengoba kunesidingo ukondla umhlaba.
Izethembiso zokumaketha zehlulekile ukwenzeka. Umbiko kaMeyi 2016 weNational Academy of Sciences utholakele akukho bufakazi ukuthi izitshalo ze-GMO zishintshe izinga lokukhuphuka kwezithelo, futhi azikho izinzuzo ezicacile yamapulazi amancane, ampofu emazweni asathuthuka.
Noma kunjalo, abasekeli be-GMO bathi, njengoba UBill Gates wakwenza kwinhlolokhono yeWall Street Journal, yokuthi abantu base-Afrika bazobulawa yindlala ngaphandle kwalapho bemukela izitshalo ze-GMO ezilungele isimo sezulu, ezinothe ngamavithamini. Amasango akuyekile ukusho ukuthi lezi zilimo namanje azikho ngemuva kweminyaka engu-20 yokulingwa nezethembiso.
Esikhundleni salokho, izitshalo eziningi ezakhiwe ngezakhi zofuzo zinjalo izilimo ezibekezelela ukhula lokho kuphakamisa ukukhathazeka mayelana zezempilo izinkinga kuxhunyiwe kuya Amakhemikhali ukuvezwa. Lezi zilimo zikhuphukile ukuthengiswa kwamakhemikhali ephethwe izinkampani ezifanayo lezo ungumnikazi wamalungelo obunikazi ngezimbewu ze-GMO - imodeli enhle kakhulu yenzuzo, kepha leyo evele ingabi yinkulu kangako kwezempilo nakwezemvelo.
Isithembiso se-biology yokwenziwa
Izinhlobo ezifanayo zezethembiso ezahluleka ukwenzeka eminyakeni engama-20 yezitshalo ze-GMO zibhebhezela ukubhebhetheka kwezobunjiniyela bezizukulwane ezizayo.
Izindlela zokwenziwa zebhayoloji “zingaletha izitshalo ezinomsoco ochuma ngamanzi amancane, umhlaba, namandla, kanye nokufakwa okumbalwa kwamakhemikhali, ezimweni zezulu eziguquguqukayo nasemazweni angenakusekela ukulima okunamandla,” kubika uJosie Garthwaite I-Atlantic.
Ngenkathi abaxhasi begxila ezinzuzweni ezizayo zesikhathi esizayo, abagxeki baphakamisa ukukhathazeka ngezingozi nemiphumela engahlosiwe. Ngaphandle kokuhlolwa kokuphepha kwangaphambi kokumaketha kokudla okwenziwe nge-biology, imithelela yezemvelo nezempilo ayaziwa kakhulu, kepha abagxeki bathi kunendawo eyodwa lapho izingozi sezivele zibonakala: ukulimala komnotho kubalimi bomdabu njengoba amakhemikhali akhuliswa elebhu angena esikhundleni sezitshalo ezilinywa ensimini. Abalimi baseParaguay naseKenya, ngokwesibonelo, bathembele ezitshalweni ze-stevia.
"Ngokuncintisana nabalimi abahlwempu nokukhohlisa abathengi ngemvelaphi yezithako zayo, i-EverSweet nezinye izibonelo zebhayoloji yokwenziwa zidala umunyu kuzo zombili izinhlangothi zomkhiqizo," kubhala uJim Thomas noSilvia Rabiero weThe ETC Group Iphrojekthi Syndicate.
Indlela eya phambili ye-biology yokwenziwa
Njengoba izintambo zempi zisondela emdeni omusha wokudla, kuphakama imibuzo enzima. Singaqinisekisa kanjani ukuthi izinto ezintsha kwezolimo zisiza umphakathi nabathengi? Ngabe ubuchwepheshe obusha bokudla buthuthukiswa kanjani ukubamba izimakethe, amalungelo obunikazi kanye nenzuzo yezinkampani ebeka phambili ukusimama, ukuphepha kokudla kanye nezixazululo zokushintsha kwesimo sezulu?
Kuzothatha okungaphezu kweziqubulo zokumaketha, futhi iwashi liyabheka ukuthola ukuthi ubuchwepheshe obusha buqhubekela phambili.
Njengoba u-Adele Peters abike ngakho fast Company, ubuchwepheshe obusha be-morphing technology obubizwa nge-CRISPR, obenza ukuthi “kwenzeke ukuhlela i-DNA ngokushesha nangokushesha,” buza esitolo esiseduze nawe.
"Uma ukuhlela isakhi sofuzo esisodwa kungathatha iminyaka ngamasu amadala, manje kungenzeka ezinsukwini ezimbalwa ngomfundi oyedwa webanga," kubika uPeters.
Ngo-Ephreli, uMnyango Wezolimo waseMelika uthathe isinqumo sokuthi ikhowe leCRISPR angabi ngaphansi komthethonqubo.
NgoJuni 1, ososayensi bamemezele ukuqala kwephrojekthi yeminyaka eyi-10 ehlose ukwakha i-genome yomuntu. Le phrojekthi ibizwa ngeHuman Genome Project - Bhala, “ngoba ihlose ukubhala iDNA yokuphila,” kubika u-Andrew Pollack ku I-New York Times.
NgoJuni 8, iNational Academy of Sciences ukhishwe umbiko mayelana “nokushayela izakhi zofuzo,” uhlobo olusha lobunjiniyela olungasabalalisa ukuguqulwa kwezakhi zofuzo kuso sonke isibalo sezinto eziphilayo, kushintshe unomphela uhlobo.
Ukushayela kweGene "abakulungele ukukhishelwa emvelweni," kusho i-NAS kuyo isitatimende sephephandaba efuna "ucwaningo oluningi nokuhlolwa okuqinile." Ngeshwa, umbiko we-NAS wehlulekile ukuveza uhlaka lokulawula oluzovikela abantu nemvelo.
Kungenzeka yini ukuthi i-synthetic biology, ukuhlela izakhi zofuzo kanye nezakhi zofuzo kungaba nezinzuzo emphakathini? Mhlawumbe yebo. Kodwa bazokwenza? Futhi ziyini izingozi?
Uma izinkampani zivunyelwe ukusebenzisa ubuchwepheshe bezobunjiniyela ukuze zizuze ezentengiselwano ngaphandle kokubheka kukahulumeni, akukho kuhlola okuzimele kwesayensi, futhi kungabi sobala, izinzuzo emphakathini zizoshiywa kwimenyu futhi abathengi bazoba sebumnyameni ngalokho esikudlayo nesikudlayo imindeni yethu.
UStacy Malkan ungumqondisi obambisene ne-US Right to Know, iqembu elingenzi nzuzo embonini yezokudla. Wenza nomsebenzi wokubonisana nabangane bomhlaba. Mlandele ku-Twitter @StacyMalkan
Ukudla Okucatshangwayo, I-GMO Bill Gates, I-Cargill, UDavid MacLennan, Dow, U-Eve Turrow Paul, FDA, ukuvutshelwa, ubuchwepheshe bokufuzo, Ama-GMO 2.0, UKelly Sheehan, Monsanto, USteve Fabro, stevia, biology zokwenziwa, USDA